1 Apr 08, 2021 Ministry of Finance launches the Development Cooperation Report (DCR), 2020
2 Mar 19, 2021 Agreement between Government of Nepal and World Bank
3 Feb 09, 2021 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
4 Feb 03, 2021 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आ.व. २०७७/७८ का लागि सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
5 Jan 27, 2021 रुपन्देही जिल्लाको तिनाउ नदी पुल र दानव नदी पुलको समुद्घाटन गर्नुहुँदै माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ।
6 Jan 26, 2021 ६९औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ।
7 Jan 26, 2021 नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुहुँदै माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ।
8 Jan 25, 2021 सरकारद्वारा घोषणा गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापनाबारे छलफल । कञ्चनपुरको दैजी छेला, बाँकेको नौबास्ता, रुपन्देहीको मोतिपुर, चितवनको शक्तिखोर, मकवानपुरको मयुरधाप र झापाको दमकमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि तयारी कार्य अघि बढाइने ।
9 Jan 24, 2021 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा । पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ ।
10 Jan 20, 2021 प्रस्तावित एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटि कार्यक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कार्यकारी निर्देशक र मिसन प्रमुखसँग मिटिङ । नेपालमा हालै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक सुधार कार्यक्रमको निरन्तरतामा नकारात्मक प्रभाव नपार्ने माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ ।
11 Jan 20, 2021 नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयमा छलफल । आयात र निर्यातलाई भन्सारसँग आवद्ध गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न आगामी सातादेखि लागू गर्न सुरु गरिने ।
12 Jan 20, 2021 अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट , कृषि तथा पशुपंछि विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र सचिवहरु सहित अर्थ मन्त्रालयमा बैठक ।नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि तयारी सम्बन्धी गृहकार्य सुरु ।
13 Jan 20, 2021 कृषि विकास बैंकको ५४औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ।
14 Jan 19, 2021 पर्यटन र होटल व्यवसायका प्रतिनिधिहरुसहित छलफल। कोभिड-१९ का कारण अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ।
15 Jan 17, 2021 माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बैठक ।कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ।
16 Jan 13, 2021 नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलद्वारा माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष सुझावहरु पेश । ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा ऋणमा २० करोड रुपैयाँको सीमा बढाउनुपर्ने लगायतका आग्रह ।
17 Jan 13, 2021 महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा आ.व. २०७६/७७ को लेखा तथा वित्तिय विवरणको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी ।
18 Jan 11, 2021 माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालको २८औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन । सहकारी आन्दोलनलाई थप उचाईमा पुर्याउन आग्रह ।
19 Jan 10, 2021 माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षसँग स्थानीय तहको बजेटबारे छलफल । स्थानीय तहहरुमा पूँजीगत खर्च बढाउने वातावरण तयार पार्न आग्रह ।
20 Jan 06, 2021 माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुबीच भेटघाट । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ ।